Aqoonyahanka , Waxgaradka Ee Beesha Habar Yoonis UK Oo Casho-Sharaf U Sameeyey Gudoomiye ku xigeenka Guddida Guud ee Beel waynta Ciidagale (Sahan Barwaaqo) | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Aqoonyahanka , Waxgaradka Ee Beesha Habar Yoonis UK Oo Casho-Sharaf U Sameeyey Gudoomiye ku xigeenka Guddida Guud ee Beel waynta Ciidagale (Sahan Barwaaqo)
January 9, 2017 | Published by: own
LONDON(OWN)- Kullan balaadhan oo waxgaradka & aqoonyahanka HY UK ku soo dhaweynayeen Gudoomiye ku xigeenka Gudida Guud ee Beel waynta Ciidagale (Sahan Barwaaqo) Ahmed Maxamed Xuseen (Guud Cade) ayaa ka qabsoomay galbeedka magaalada London Norman Restaurant. Kulankaas oo si balaadhan oo qurux badan loo soo agaasimay, ayaa dad badan ka soo Qayb galeen.
Waxaana ugu horayn hadalka furay Muj Casayr C/qaadir oo si diiran oo kal & laab ah u soo dhaweeyay Mudane Ahmed Maxamed Xuseen Guud Cade halkaas oo uu taariikh badan ka sheekeeyay oo Somaliland soo martay. Waxa isna hadalkii Qaatay C/Xakiin Cali Xayd oo ka mid ah Gudida HY UK oo si balaadhan ugu mahadceliyay dhamaan dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay madashan quruxda badan. Waxa kale oo uu si kalgacaltooyo ah ku soo dhaweeyay Mudane Axmed Maxamed Xuseen (Guudcade) iyo Xubnaha kale sharafta leh ee la socday.
Intaa ka dib waxa hadalkii u baxay Dr Abokor Cige oo sheegay in Ahmed Maxamed Xuseen Mudan yahay in la soo dhaweeyo maadaama aan ogahay hawlaha khayriga ee uu qabtay wakhtigiisana inta badan uu siiyo. Dr Abokor wuxu Intaas ku daray sida ay u haboon tahay in laga shaqeeyo hawlaha khayriga iyo waxa ay diinteena suuban ina farayso arimahaas Tabarucaadka ah oo ah kuwo ilaahaay loogu dhawaanayo.
Maxamuud (Hamle) ayaa isna halkaa ka jeediyay kalmado kooban oo soo dhawayn ah una mahadceliyay odayada sharafta iyo ixtiraamka Mudan ee soo ajiibay shirkan muhiimka inoo ah dhamanteen gudo iyo dibadba. Inta ka dib waxa hadalkii la wareegay Maxamed Xasan Jafal oo ka mid odaydayada muxtarimka ee wadankan aad looga qadariyo halkaana ka jeediyay mahadcelin balaadhan sida sharafta leh ee aad gogoshan quruxda badan noogu sharafteen anaga oo galbinayna Gudoomiye ku xigeenka Sahan Barwaaqo Ahmed Maxamed Xuseen (Guuddcade). Isaga oo ku tilmaamay nin wax badan ka qabtay intii uu ka mid ahaa Gudida Sahan Barwaaqo waxaanan talo ku soo jeedinayaa in hawlaha khayriga is guud looga wada shaqeeyo.
Prof Ciise Xuseen ayaa isna madasha si mug iyo miisaan leh ugu mahad celiyay sheegayna hawshu maanta inoo bilaabayntay halkaana aan ka wadi doono insha Allah. Maxamed Yuusuf Diirqadhaadh oo ka mid Xubanaha Gudida Sahan Barwaaq ee qurbaha ahna Xubin wakiil uga ah UK ayaa isna aad uga mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay oo ah mid ka dhaxaysa labada beelood ee walaalaha ah.
Ugu dambayntii waxa hadalka soo gabagabeeyay Mudane Ahmed Maxamed Xuseen Guudcade. Waxaanu si diiran oo dareen leh uga mahad celiyay sida sharafta leh ee Waxgaradka beesha HY u soo dhawaysay. Wuxuu ka waramay inay gacanta ku hayaan mashaariic balaadhan oo qaarna ay si toos ah gacanta ugu hayaan, qaarna si dadban oo ururo Khayri ah oo hoos yimaada gudida guud ee Beelweynta Ciidagale (Sahan Barwaaqo) gacanta ku hayaan. Mashaariicda ay gacanta sida tooska ah gacanta ugu hayaan Sahal Barwaaqo Waxaa ka mid ah; Wadaad Cad ee isku xidha Salaxlay iyo Ina Guuxaa. Mashaariicda noocaas ah Waxaa fulin Kara Dawlad uun. Hase yeeshee annaga oo ku tiirsan taageerada dadkayga gudaha iyo dibada jooga ayaan Illaahay la kaashanay. Meel fiican ayaanay noo maraysaa. Ururada kale ee Khayriga ah ee na hoos yimaada Waxaa ka mid ah; Ururka Khayriga ah ee Gaaroodi oo isna mashaariic badan fuliyay, qaar kalena wada. Ururka Khayriga ah ee Haldoor oo Iskuulka Farsamada gacanta dhisaaya. Ururka Khayriga ah ee Manhal oo isna mashaariic badan ka wada deegaanada beesha Ciidagale degto. Ururka Khayriga ah ee Hayaan oo isna hawlo balaadhan wada.
Ururka Khayriga ah ee Gaaroodi loo isna hawlo balaadhan gacanta ku haya.
Gebegabadii wuxuu Gudoomiye Guudcade codsaday in dhamaan dadka reer Somaliland ka gacan siiyaan mashaariicdaa balaadhan ee ay gacanta ku hayaan.